Khudaar (Af-Carabi: خضار Af-Taliyaani: verdura Af-Ingiriis: vegetable) waa midho ka baxa dhirta kuwaas oo lagu darsado cuntada. Khudaartu way ka duwan tahay midhaha, sababtoo ah midhuhu waa cunto bisil oo in la kariyo u baahnayn, laakiin inta u badan khudaarta waa in la kariyo ka hor intaan la cunin. Khudaarta maalin walba dadku isticmaalaan waxaa ka mid ah: basasha, tamaandhada, barandhaha, saladhka, toonta, kaarootka, besbaaska, iyo kuwo kale oo badan.
Hilib(Af-Ingiriis: meat; Af-Carabi: لحم) waa jiidhka xayawaanka kaasi oo dadku u quutaan cunto ahaan. Sida caadiga ah, aadamuhu (dadka) waa gebi-quute (Saynis ahaan omnivorous), taasi micnaheedu waa in dadku quutaan hilibka iyo caanaha xayawaanka iyo dhamaan kheyraadka dhirta.
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 06:33, 26 Juun 2017.